တရုတ်နိုင်ငံက 5G ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုအား တိုးချဲ့လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုအထိ 5G အခြေစိုက်စခန်း ၉၉၃,၀၀၀ အား တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကောင်တီများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နှင့် ကျေးလက်မြို့နယ်များ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လွှမ်းခြုံထားကြောင်း စက်မှု နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနက ဩဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။5G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် ၃၉၂ သန်း ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပေကျင်းမြို့၌ ဩဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ 5G ညီလာခံ(2021 World 5G Convention)၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်သူ ၊ ပညာရှင် နှင့် လုပ်ငန်းရှင် ၁၅၀၀ ကျော် တို့က အွန်လိုင်း နှင့် အော့ဖ်လိုင်းတို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“5G+ By All For All” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော အဆိုပါ ညီလာခံသည် ဒီဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေး ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရေးတို့အပေါ် အဓိကထားပြီး 5G နယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းတို့အား ပံ့ပိုးကူညီပေးနေကြောင်း သိရသည်။
သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည့်ပွဲတွင် ဖိုရမ်များ ၊ ပြပွဲများ နှင့် 5G အခြေခံသည့် အက်ပလီကေးရှင်းဒီဇိုင်းယှဉ်ပြိုင်မှုများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ဖိုရမ် ၁၁ ခုအနက် ၈ ခုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအင်တာနက် ၊ ကာဗွန်လျှော့ချရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် နှင့် မီဒီယာ တို့တွင် 5G အက်ပလီကေးရှင်းများအပေါ် အဓိကထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ 5G ညီလာခံသည် 5G နယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ညီလာခံ ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ကွန်ဗင်းရှင်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပေကျင်းမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 1 (Xinhua) — China has so far built 993,000 5G base stations, covering more than 95 percent of counties and 35 percent of rural townships, the Ministry of Industry and Information Technology said Tuesday.
The convention, themed “5G+ By All For All,” focuses on jointly building digital infrastructure, promoting industrial cooperation, and facilitating international cooperation and industrial chain collaboration and innovation in the field of 5G.
The World 5G Convention is the world’s first international conference in the 5G field. The first edition of this event took place in Beijing in 2019. ■
Photo – A coffee-brewing robot is displayed at the venue of 2021 World 5G Convention in Beijing, capital of China, Aug. 31, 2021. (Xinhua/Ren Chao)